Miranda Lambert wekare anoti akamubiridzira, anodaidzira Blake Shelton futi - Nhau
Miranda Lambert wekare anoti akamubiridzira, anodaidzira Blake Shelton futi
Miranda Lambert akazviwana ari pa nzvimbo yekubiridzira vhiki rapfuura, iyo yakapa hupenyu hutsva kuzvakaitika zvekare zvekusatendeka.
Iye ex Jeff Allen, aimbove muimbi wenyika iye zvino ari mubati, anoti Miranda akamubiridzira naye Blake Shelton .
Mufananidzo Wakakwana / REX / Shutterstock
Kudzokorora nekukurumidza kwekuuya kwatakaita pano: Musi waApril 24, magazini maviri, Us Weekly uye In Touch, yakaburitsa mishumo ichipomera Miranda nezve kubatana nevaroora Turnpike Troubadours mutungamiri wepamberi Evan Felker Evan asati aendesa kurambana kubva kumukadzi wake, Staci, munaFebruary. Pane fungidziro yekuti Miranda anga achiri kufambidzana nemuimbi Anderson East, mukomana wake kweanopfuura makore maviri, kutenderera nguva futi.
Zuva rakatevera, murume aimbova murume waMiranda, Blake Shelton , vakaiswa mukati imwe yakavanzika tweet : 'Wakatora mugwagwa wakakwira kwenguva yakareba .. ndakapotsa ndarega. Asi ini ndinogona pakupedzisira kuona chimwe chinhu pairi kumusoro kumusoro uko !! Mira !! Zvingave here?! Yep !! Ndiyo karma !! ' akanyora. Fans vakabva vafungidzira kuti Blake aive kudaidza Miranda panze yekumubiridzira asati amuramba muna Chikunguru 2015.
NINA PROMMER / EPA-EFE / REX / Shutterstock; Frazer Harrison / Getty Mifananidzo yeStagecoach
Zuva rakatevera muna Kubvumbi 26, aMiranda wekare, Jeff, akaenda kunhau dzezvemagariro kushora Blake. 'Unoziva, ini ndagara ndichikupa iwe mukana wekusahadzika uye ndikachikora kuti ungova munhu, Asi iwe unofanirwa kuve unozvitutumadza SOB kuti ubudise chinhu chakadai, apo ini ndichiziva zvakanyanya zvakanaka uye zvakanaka iwe wanga uchibiridzira pane wako mudzimai naMiranda vanga vachindibiridzira pamakatangisa, 'akanyora kudaro tweet yabvisa kuna Blake, Isu Vhiki yakashuma.
Jeff akabva atumira tweet, 'Ini ndakachengeta muromo wangu kuvhara kwemakore gumi nematatu. Ndine urombo, yake karma tweet yakandibata zvisiri izvo. Zvese izvi hazvina maturo. '
Vaviri Miranda naBlake vakambobvuma kuti vakadonha mushure mekusangana pagore ra2005 CMT duets yakakosha kutepwa apo Blake akaroora mukadzi wekutanga Kaynette Williams
Frederick M. Brown / Getty Mifananidzo
Jeff akaenderera mberi nekutsanangura kuburitsa kwake Twitter ku RadarOnline . 'Ndine chokwadi kuti Miranda akaita [Blake] tsvina sezvaakandiita, asi anga asiri kufunga nezvangu paakange achibiridzira naye, saka handizive kuti sei achifunga kuti ndiyo karma, 'akadaro Jeff. Radar yakazivisa kuti Jeff naMiranda vakatovimbisana, uye kuti Miranda anonzi akarasa Jeff nhare mushure memakore matatu ekubatanidzwa makore ese apfuura.
'Shamwari yangu yakanditumira Blake's tweet uye ini ndaingofunga kuti yaive yekuzvitutumadza uye kuisa-kuisa. Ndakangofunga kuti, 'Iwe murume, enda urarame hupenyu hwako uite zvinhu zvako wega.' Ini ndaimuvhurira mashoo uye ndaiziva vanhu padhorobha vaimuziva uye ini ndaisambotaura chero chinhu. Asi yake tweet yakangondikwenya zvakanyanya, 'akawedzera Jeff.
Akaenderera achiti, 'Ini ndanga ndisiri kuzviitira kunamira Miranda - handisi kuyedza kumuregedza, nekuti zvinotora zviviri.'
Kristen Stewart anobata maoko nemusikana mutsva Dylan Meyer kuToronto International Film Festival
Brandi Glanville, LeAnn Rimes vanoita 'rugare' mushure memakore ekukakavara: Ona mufananidzo
kylie jenner na tyga vakaroora
ashton kutcher na dax shepard
jamie foxx katie holmes ane pamuviri